Khilaaf ka dhax jira Wasarada Arrimaha Dibada Soomaaliya | KEYDMEDIA ONLINE
Khilaaf ka dhax jira Wasarada Arrimaha Dibada Soomaaliya
Muqdisho (KON) - Mudooyinkii danbe ayaa waxaa jiray in Wasaradda Arimaha Dibadda iyo xiriirka Caalamiga ee Soomaaliya in uu ka dhax jiro is qab qabsi iyo Khilaaf soo kala dhax galay Madaxda Wasaradaasi.
Arintaasina waxa ay sababtay in maanta ay u yeeraan Wasiirka arimaha Dibadda Soomaaliya Gudiga arimaha Dibadda ee Baarlamanka si ay u xaliyaan Khilaafkaasi.
Xildhibaan Aweys C/laahi Ibraahin oo ah Xoghayaha Gudiga arimaha Dibadda iyo Xiriirka Caalamiga ah ee Baarlamanka oo la hadlayay Warbahinta ayaa waxa uu tilmamay in Maanta ay la balansan yihiin Wasiirka arimaha Dibadda Soomaaliya Fowsiyo Yuusuf Xaaji Aadan islamarkana ay kala hadli doonan Khilafka la shaaciyay in uu soo kala dhaxgalay Madaxdda wasaradaasi.
Xildhibaanka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ay ku dadaali doonaan in ay xaliyaan Khilaafaadkaasi hadii ay ku guul dareystaana waxa uu xusay in Dad weynaha Soomaliyeed ay u shegi doonan wax yaabaha ay ku qotomo khilaafkafaadkasi.
Waxaa la sheegay in Khilaafka ugu badan ee Soo kala dhaxgalay Madaxda Wasaradda arimaha Dibadda ee Soomaaliya uu ku saleysan yahay qaabka loo magacaabi lahaa Safiiradda Soomaaliya u kala fadhiisan doono Wadamadda Caalamka Qaarkood.